Mpifaninana amin'i Xiaomi Mi Band 5 ve ny OnePlus Band? | TeraNews.net
OnePlus Band ve mpifaninana amin'ny Xiaomi Mi Band 5?
mpanoratra Nikitin Eugenius Navoaka tamin'ny 04.01.2021
Tsy manana traikefa amin'ny faritra rehetra ianao, azo atao ny mandefa vokatra eny an-tsena arakaraka ny tranga roa. Mamorona zava-baovao sy tokana. Na, raiso ny hevitry ny mpifaninana iray, ovao izy ary asehoy amin'ny alàlan'ny sary famantarana anao manokana. Ny Corporation BBK, rehefa nanambara ny famotsorana ny OnePlus Band, dia nanapa-kevitra ny amin'ny safidy fahatelo. Raiso ho fototra i Xiaomi Mi Band 5 ary ataovy mangatsiaka kokoa. Raha jerena ny fisehoana dia nisalasala ela ny mpanamboatra ary tsy nanao kopian'ny famantaranandro Xiaomi malaza.
Nanoratra tao amin'ny Twitter i Insider Ishan Agarwal fa mpifaninana mivantana amin'ny Xiaomi Mi Band 5 ny vokatra vaovao amin'ny lafiny fampiasa sy ny vidiny. Sarimihetsika AMOLED 1.1 santimetatra, fiarovana IP68, fanaraha-maso ny tahan'ny fo. Misy aza ny famaritana ny saturation ny oxygen oxygen. Ny vidin'ny OnePlus Band dia $ 35.
Tsy misy mariky ny fifaninanana amin'ny Xiaomi Mi Band 5 eto. Raha tsy hoe satria mahaliana kokoa ny fiasan'ny OnePlus Band. Ho an'ny fahasambarana feno, ny modely NFC ihany no tsy hita. Ary mahamenatra ny tsy fahitan'ny mpanamboatra an'io. Rehefa dinihina tokoa, izao tontolo izao dia niova hatry ny ela tamin'ity teknolojia tsy misy tariby ity. Avelao ny OnePlus Band vidiny $ 5 hafa. Saingy nahaliana kokoa ny mpividy izany. Enga anie tsy ho toy izany XiaomiOnePlus dia tsy hijanona amin'ny endrika iray, fa hamoaka vokatra mahaliana kokoa.
POCO voalohany: smartwatch sy smartphone
Segway Ninebot Engine Speaker dia miteraka firohondrohon'ny motera mahery vaika
Nikon CFexpress Type B 660 GB ho an'ny Z9
Fiara mifono vy Oppo Find X5 Pro + - famaritana
Sony WH-XB910N sofina tsy misy sofina
ASUS GeForce RTX 3080 10GB Noctua Edition karatra sary
UFS 4.0 - Samsung dia manapaka stereotypes
Nokia N73 flagship nambara tamin'ny fakan-tsary 200 MP
Drone DJI Mini 3 Pro dia milanja 249 grama ary optika mangatsiatsiaka
Apple, Google ary Microsoft Mifanohitra amin'ny lalàna momba ny fanajana ny zon'ny mpamorona
Dune HD RealBox 4K TV boaty: Mividiana mendrika
MiTo MT3 Noctua Keycap Set - eo amoron'ny fiaraha-miasa vaovao
Inona ny Wi-Fi 6, maninona no ilaina izany ary inona no antenaina